UGoogle uqinisekisa ukuba uza kuhlaziya iimovie kwifomathi ye4k simahla | I-Androidsis
UGoogle uqinisekisa ukuba uza kuhlaziya iimovie kwifomathi ye4k simahla
Nge-14 ka-Okthobha, saphinda sahlaziya uhlalutyo olwenziwe ngabafana bamaPolisa e-Android kwikhowudi yesicelo seMidlalo yeVidiyo, ikhowudi esibonisileyo ukuba isigebenga phucula simahla iimovie ze-HD kwifomathi ye-4k ngokupheleleyo simahla.
Kwangolo suku lunye, uhlaziyo lwakhutshwa, kodwa kwakungekho mkhondo malunga nokuhlaziywa Umxholo we-SD kunye ne-HD kwi4k simahla. Izolo, uGoogle ubhengeze ngokusesikweni eli thuba, intshukumo kaGoogle ngokungathandabuzekiyo iya kubaxabisa bonke abasebenzisi abanomabonakude okwangoku kumgangatho we4k.
Ukusukela izolo, zonke iimuvi ebesizithengile ngaphambili kumgangatho we-SD kunye ne-HD iya kuphuculwa ngokuthe ngqo kumgangatho we-4k Nje ukuba bafumaneke eqongeni. Ukongeza, ixabiso leemovie kwisisombululo se-4k liza kuncitshiswa.
Olu hlaziyo lwasimahla kuphela iyafumaneka kuwo wonke umxholo obuthengiwe ngaphambi kwayizolo, ke yonke imixholo emitsha esiyithengayo ukuza kuthi ga ngoku, kwifomathi ye-SD okanye ye-HD, ayizukuhlaziywa simahla, ke ayizukuyenza into elungileyo ukuthenga imovie kumgangatho we-SD ukuzama ukuzihlaziya simahla kumgangatho we-4k.
Okwangoku, zonke iifilimu ezivela kwiFox, iLionsgate, iNBC Universal, uNyana kunye neWarner Bros iya kuhlaziya ngokuzenzekelayo kumgangatho we-4k kwakamsinya nje emva kokufumaneka, kungoko kunokwenzeka ukuba kwesinye isihloko kufuneka silinde.
Uninzi lweeSmart Smart TV ezixhasa isisombululo se4k azenzi njalo ikuvumela ukuba udlale umxholo ngokuthe ngqo kwiiMidlalo zeMidlalo, ukuze kungabikho mfuneko yokusebenzisa iCromecast Ultra. Kodwa ayisiyiyo kuphela umenzi onikezela olu khetho, kuba umenzi we-LG ukwandisa inani lezixhobo ezinolu khetho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » UGoogle uqinisekisa ukuba uza kuhlaziya iimovie kwifomathi ye4k simahla
Thenga ngoku izithethi zeAmazon Echo ngezaphulelo kwihlazo
I-Xiaomi Mi Mix 3: Isikrini sonke ngokuhambisa isikrini